Wararka - Chlorothalonil
Chlorothalonil iyo fungicides ka ilaaliya
Chlorothalonil iyo Mancozeb labaduba waa fungicides-ka difaaca ee soo baxay 1960-meeyadii waxaana markii ugu horreysay soo sheegay TURNER NJ horraantii 1960-meeyadii. Chlorothalonil waxaa la galiyay suuqa 1963 by Diamond Alkali Co. (kadib iibiyey ISK Biosciences Corp. ee Japan) ka dibna loo iibiyey Zeneca Agrochemicals (hadda Syngenta) ee 1997. Chlorothalonil waa difaac ballaaran-spectrum fungicides oo leh goobo badan oo fal, Kaas oo loo isticmaali karo ka-hortagga iyo daaweynta cudurrada caleenta cawska. Diyaarinta chlorothalonil waxaa markii ugu horreysay laga diiwaan geliyay Mareykanka 1966 waxaana loo isticmaalay cawska. Dhowr sano ka dib, waxay heshay diiwaangelinta fungicides baradho ee Maraykanka. Waxay ahayd fungiciciladii ugu horreeyay ee loo oggolaaday dalagyada cuntada ee Maraykanka. Bishii Disembar 24, 1980, badeecada uruurinta hakinta ee la roonaaday (Daconil 2787 Flowable Fungicide) waa la diiwaan geliyay. Sannadkii 2002, badeecadii hore ee cawska ee Daconil 2787 W-75 TurfCare ee hore uga diwaangashanayd waxay ku dhacday Kanada, laakiin badeecada hakinta ah ayaa la isticmaalay ilaa maantadan la joogo. Luulyo 19, 2006, badeeco kale oo chlorothalonil, Daconil Ultrex, ayaa markii ugu horreysay la diiwaan geliyay.
Shanta suuq ee ugu sarreeya ee chlorothalonil waxay ku yaalliin Mareykanka, Faransiiska, Shiinaha, Brazil, iyo Japan. Maraykanku waa suuqa ugu weyn. Dalagga dalagga ugu muhiimsan waa miraha, khudaarta iyo badarka, baradhada, iyo codsiyada aan dalagga ahayn. badarka Yurub iyo baradhada ayaa ah dalagyada ugu muhiimsan ee chlorothalonil.
Fungicides-ka ilaalinta waxaa loola jeedaa ku buufinta dusha sare ee geedka ka hor inta uusan cudurku dhicin geedka si looga hortago duullaanka cudur-sidaha, si geedka loo ilaaliyo. Fungicides-ka ilaalinta noocan oo kale ah ayaa horay loo sameeyay waxaana la isticmaalay waqtiga ugu dheer.
Chlorothalonil waa fungicide ballaadhan oo leh goobo ficilo badan oo ilaalin ah. Waxaa inta badan loo isticmaalaa buufinta caleenta si looga hortago loona xakameeyo cudurrada kala duwan ee dalagyada kala duwan sida khudaarta, geedaha miraha iyo sarreenka, sida xabagta hore, xabagta dambe, caarada hoose, caarada budada, barta caleenta, iwm. iyo dhaqdhaqaaqa zoospore.
Intaa waxaa dheer, chlorothalonil sidoo kale waxaa loo isticmaalaa sidii alwaax ilaalin ah iyo rinjiga lagu daro (ka-hortagga daxalka).
Waqtiga boostada: Nov-09-2021